လူမှု့ဖူလုံရေးပေါ်လစီ နောက်ကွယ်မှ ငြီးတွားသံများ (ကိုမောင်မောင်ဝမ်း) ~ ဒီမိုဝေယံ
လူမှု့ဖူလုံရေးပေါ်လစီ နောက်ကွယ်မှ ငြီးတွားသံများ (ကိုမောင်မောင်ဝမ်း)
လူမှု့ဖူလုံရေးပေါ်လစီ နောက်ကွယ်မှ ငြီးတွားသံများ (မောင်မောင်ဝမ်း) ကိုမောင်မောင်ဝမ်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
မြန်မာပြည်မြောက်ဖျား ကချင်ပြည်နယ် (မေခမြစ်အတွင်းမှ...
ခြေပုန်းခုတ်နေတဲ့ သတင်းတွေ ရှိတယ်.... (ဆောင်းပါးရှ...
၂၀၁၁ခုနှစ် ရုရှားမှာ ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး ...
ခြင်နှိမ်နင်းရေး ဆောင်းပါး (ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
အချိန်မကျဘဲ ကြေမွသွားတဲ့ ပန်းတပွင့် (ဗမာ့သွေး)
Blinker Hacker Group မှ နအဖ အား DDos ဖြင့်တိုက်ခို...
ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုသော အသံ...
အမေ့အိမ်ကျောင်း (မြောက်ဥက္ကလာ) ဆောက်လုပ်ရန် အကူညီတေ...
ထပ် လုပ်ပါပြီ။ ထပ် ဆူပါပြီ။ နောက်တကြိမ် ပြန်ဖမ်းပေ...
ခဏလေးတောင် အချိန်လေး မပေးနိုင်ကြတော့ဘူးလားဗျာ...
မြန်မာ့နိုင်ငံ အရေးအပေါ် ကျနော်၏ ကိုယ်ပိုင် အမြင်(၂...
ဂျပန်နှင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားမျ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ၁၀နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား....
အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်း...
ကျော်သူထုံး .... ၁၀နှစ်ပြည့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ၁၀နှစ်ပြည့် နှစ်ပါတ်လည်...
မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့က အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ကျင်းပခ...
သင်္ကြန်အတက်နေ့က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ြ...
မြန်မာ့နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကမာကူရ ဆင...
“ အညတြသူရဲကောင်းများ”( မောင်မောင်ဝမ်း )
၅ညသံစဉ် (ခရီးသွားခြေလှမ်းများ) .....
အဖွဲ့ချုပ်မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ သက...
ရုရှားမှာ ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ပွ...
နယူးဒေလီ မြန်မာ့အတာသင်္ကြန်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား (ဓာတ်ပ...
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့က ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ...
သင်္ကြန်အကျနေ့ ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ပြု...
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပေါ်ကျနော်၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်.. (ဆေ...
နိုင်ငံရေးဆိုတာ မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ အလုပ် (ဆောင်းပါ...
ဂျပန်ဖူကူရှီးမား နျူးကလီးယား ရေဒီယိုဓာတ်သတ္တိကြွမှု...
ရှန်တိနိကေတန် (၉၀) (ဆရာကြီးပါရဂူ၏ ဈာပနခရီး မြင်ကွ...
မသေခင်တွေ့ ရမည့် နတ်ချမ်းသာ.. (ဆရာပါရဂူ ဈာပနခရီး ...
ပဏ္ဍိတာရာမ ရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ရိပ်သာ၌ လူထုခေါင်းဆော...
မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ တရားတော် (ရွှေည၀ါဆရာတော်) (အသံဖို...
တိရစ္ဆာန်ရုံ ထူးကုမ္ပဏီ၊ မျှော်လင့်နေတဲ့ သမ္မတမိန့်ခွ...
လူထုခါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဟန်းအမ ပြုလုပ်တ...
ဆိုကြမယ် ကကြမယ်.... ????? (ရုရှား)
နှစ်ကူးနှစ်ဦးမှာ ခိုးကူးသီချင်းတွေ ဝေနေတဲ့ အတာသကြ...
ခရမ်းမြို့နယ်၏ အရက်စက်ဆုံး မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး အေ...
အီဝါးတဲ့ခရိုင် ရိကုဇဲန်း တာကာတာမြို့ရှိ ဆူနာမိ ရေေ...
၂၀၁၀ခုနှစ်က ရုရှားမှာ ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာစစ်ဗိုလ် ကေ...
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မင်္ဂလာဒိုး အနုပညာအင်အားစုမှ တင်ဆက...
ငလျင်ဒဏ်နှင့် ဆူနာမီရေလှိုင်းဒဏ်သင့် ဂျပန်ပြည်သူမျ...
ဒီမိုကရေစီလွှတ်တော်အစိုးရအား ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးန...
မြန်မာပြည်မှာ ထုတ်လုပ်သည်... ဘာအတွက် ဆိုတာကတော့......
လူငယ်တွေအတွက် အမှာစကား (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှို...
မတူညီသော ကမ္ဗည်းထိုး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ အလှူ နှစ်ခု....
ဆူနာမီ ရေလှိုင်းဒဏ်ခံရပြီး ၃ပါတ်အကြာ၌ ပင်လယ်အတွင်း...
အရပ်သားအစိုးရ၊ အမျိုးသမီး(ဒု)ဝန်ကြီးများနဲ့ အခွင့်...
သက်တော်(၁၀၀) ဓါတ်ပေါင်းစုံ အောင်မင်းခေါင်ဆရာတော်ကြ...
လူမှု့ဖူလုံရေးပေါ်လစီ နောက်ကွယ်မှ ငြီးတွားသံများ (ကိ...
ပြောတိုင်းယုံတဲ့ ပုတ်သင်ညို ခေါင်းညိတ်တတ်တယ်ဆို.. ...